Futa ရှာပုံတော်အတွက်:အခမဲ့ Futanari ရာက္ဇာညမ်းဂိမ်း
ကစားအားလုံးအသစ် FUTA ရှာပုံတော်
ဟေ့အဲဒီမှာ–ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳ FUTA ရှာပုံတော်! ကျနော်တို့အနေကြေညာဖို့ကျေနပ်ဒီခေါင်းစဉ်ပြီးနောက် ၄ အရှည်နှစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မျှော်လင့်ချက်ရှိသည်သောအဖြစ်အများကြီးပျော်စရာကစားခြင်းအဖြစ်ကျနော်တို့ကဖန်တီး! ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရူပါရုံမှစတင်ခဲ့ကြောင်းသေချာစေရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်အများဆုံးကိုချစ်၏–နှင့်တန်ဖိုး–စက်ဝိုင်းထဲမှာမြှုပ်နှံဖို့အရွယ်ရောက်ပြီး။ နေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်မှုလုပ်ငန်းနေဆဲအလွန်ကြီးသည္တဲ့၊ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်အကြီးမားသောအလားအလာမှအခြားခေါင်းစဉ်အကြောင်းပြုလွန်သည့်အခါကောင်းစွာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူတို့ရဲ့ညမ်းဂိမ်းအွန်လိုင်း။ ယနေ့အချိန်တွင်၊ကျနော်တို့ချင်ပါတယ်ကဲ့သို့ဖိတ်ခေါ်ရန်သင်တက်လက်မှတ်ထိုးရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်း၊တာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့ကစားကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကလွှတ်ပေး!, ပထမဦးဆုံးဆွဲ၌ထသြဂုတ်လ ၂၀၁၆၊ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီထံမှအခွန်အခွန်အပြီးပြည့်စုံသောဂိမ်းနှင့်သေချာဒါကြောင့်အဆင်သင့်ဖွင့်လာတဲ့အတွက်လူတိုင်းပျော်မွေ့ရန်။ ဤအစမ်းစမ်းသပ်မှု၊ဒီမကတစ်ခုဖြစ်ဖိတ္ေ:ဤအပြည့်အဝ၊ပွတ်လွှတ်ပေးရန်နိုင်ပါကြောင်းကိုသင်ပျော်မွေ့စတင်ထံမှပြီးမှအဖြစ်ခဲ့ကြလျှင်အပင်ဂိမ်း။ တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်လုံးဝအာရုံစိုက်လှည့်ပတ် FUTA! တစ်ခုခုကဲ့သို့မြည်စေခြင်းငှါအတွက်စိတ်ဝင်စား? ပြီးတော့အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးအခုအချိန်မှာကျနော်တို့မြင်ရပါလိမ့်မယ်၊သင်သည်အခြားဘက်ခြမ်းအပေါ်။ ဒါဟာအချိန်ပြသတယောက်ပိုပြီးလူဘယ်လောက်ကြီးမြတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်း!
ဖန်တီးသောအခါဂိမ်းမိတ်ဆက် futanari၊ဒါကြောင့်သေချာအောင်အရေးကြီးသောအမြင်ကိုဖော်ပြရန်အဓိကအရောင်းရဆုံးအမှတ်။ အဖြစ်အားလုံးနှင့်အတူညစ်ညမ်းဂိမ်း၊သင်အောင်မြင်ဖြစ်သွားကြသည်အပေါ်အခြေခံပြီးသင့်ရဲ့အမြင်အာရုံဗေရာအားလုံးထက်ကျော်။ အခါနောက်ဆုံးအချိန်သင်အစားအောင်မြင်သောအက္ခညမ်း။ သူတို့မတည်ရှိ! အချို့သောအမြင်အာရုံအကြောင်းအရာရှင်ဘုရင်ဖြစ်၏နှင့် FUTA ရှာပုံတော်၊ကျွန်တော်ကျူးလွန်ကြီးမားတဲ့မျိူးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအချိန်ရတဲ့အရုပ်တုဆင်းတုများသည်မှန်ကန်သော။, တစ်ခုချင်းစီမော်ဒယ်ခဲ့ပြင်ဆင်ထားသောအကြိမ်ပေါင်းများစွာသောသေချာစေရန်ထိုသို့ပွဲများကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သောရူပါရုံကိုဆက်လက်ကြည့်ကောင်းရှုကောင်းအတိုင်းကျနော်တို့လွှတ်ပေးရေးအသစ်အကြောင်းအရာနှင့်မွမ်းကျော်ကိုလာမယ့်နှစ်။ အခါသင်ဒီဂိမ်းကိုကစားနိုင်ရင်၊ခင်ဗျားရဲ့တူကခံစားရမ-ညမ်းခေါင်းစဉ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌၎င်း၏အမြင်အာရုံအသွင်အပြင်၊တစ်ခုတည်းသောအခါလိင်ဖြစ်ပျက်၊ဒါကြောင့်ကြည့်ရှုစိတ်ကူး! Futanari စိတ်ဝင်စားစရာနယ်ပယ်ခဲယဉ်းသောအလုပ်မှန်တယ်၊ဒါပေမဲ့အတူအပြည့်အဝ-အချိန်အဖွဲ့ည့္ဒီ၏အချို့အကောင်းဆုံးအဆိုတော်များအတွက်ပတ်ပတ်လည်ဤဌာနခွဲ၏အနုပညာလက်ရာများ၊ကျနော်တို့စိတ်ချယုံကြည်ကြောင်းသင်အမှန်တကယ်ပျော်မွေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချဉ်းကပ်မှုနှင့်။, ကျွန်တော်ပင်တစ်ထုံးစံဇိုင်နာသူပဲကြောင်းသေချာစေရန်ဒီမှာသူတို့ cocks ကြည့်ပြီးပြည့်စုံသော–အရူး၊ကျွန်တော်သိသည်!
ဂိမ်းအတွက် FUTA ရှာပုံတော်
နေစဉ်၊ဂရပ်ဖစ်သိသာထင်ရှားစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်ချင်ကြတဲ့ဂိမ်းနှင့်အတူကောင်းသောဂိမ်းကစားခြင်း။ ဘချေးမှအကြီးအကျယ်အခြားအောင်မြင်သောဂျပန်အလုပ်လုပ်တယ်အပါအဝင်၊Pokémon နှင့်နောက်ဆုံးစိတ်ကူးယဉ်။ သင်ဖွယ်ရှိခံစားရ၏အသိအကျွမ်းနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းအင်္ဂါရပ်နှင့်ကိရိယာတာနဲ့တက်ပစ်ခတ် FUTA ရှာပုံတော်:ဒါဟာခေတ်သစ်ဂိမ်းအဘို့ခေတ်မီညမ်းနိူးသူလည်းဖြစ်ဂိမ်းကစား။ အဆိုပါထိန်းချုပ်မှုများမှာတော်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကို-ရှင်းလင်း၊ဒါပေမယ့်သင်လုပ်နိုင် rebind အရာအားလုံးမီနူးထဲမှာဆိုရင်တော့ဆန္ဒ–အဆိုပါရွေးချယ်မှုရင်းသင့်သည်! သင်သွားကဲ့သို့သင်တို့ပတ်လည် FUTA ရှာပုံတော်၊သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အများကြီးရှာဖှေနှင့် NPCs နှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့။, ပါကသင့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်ဒီဂိမ်းပေါ်တစ်ဦးလေးနက်တဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအရလဒ်များနှင့်ပိန်ခင်ဗျားလုပ်နေနိုင်စွမ်းမှတဆင့်တိုးတက်မှုအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောလုပ်ရပ်များ။ ဒါဟာဖို့အကြံပြုနယ်အကြိမ်စုံတွဲတစ်တွဲကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့အားလုံးရွေးချယ်စရာရှိ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဂိမ်း။ ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချနေတဲ့ချစ်ရန်သွားကြသည်ဤဂိမ်းကစားဤမျှလောက်သင်ပြန်လာပါလိမ့်မယ်အချိန်နှင့်အချိန်နောက်တဖန်အကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှအခြားရှုထောင့်။ သင်တို့သည်အလူးအဘို့အသင်ကိုယ်တိုင်ဒါကြောင့်ပျောက်ဆုံးနေလျှင်သင်အများကြီးမပေးပါဘူးကြောင့်အများ၏စုံတွဲတစ်တွဲပြိး–ကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်ကိုးစားကြောင်းပေါ်တ!
အစဉ်အပျင်းရတူညီသောအဟောင်း NPCs ရိွေတိုင်းအတွက်ဂိမ်းနှင့်အလွန်အနည်းငယ် discernable သူတို့ကိုအကြားရှိကွဲပြားခြားနား? ကောင်းစွာထို့နောက်သင်ချစ်ရန်သွားကြသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစနစ်! ဒါဟာရဲ့အတော်လေးရှုပ်ထွေးခဲယဉ်းဤရှင်းပြဖို့အတွက်အချိန်အတိုတောင်းတဲ့ကာလ၊ဒါပေမယ့်အခြေခံအချက်များဖြစ်ကြသောကွဲပြားခြားနားသော NPCs ပြီအမျိုးမျိုးသောဆိုင္ကယ္အချစ်နှင့်အမုန်းအဖြစ်အနည်းငယ်အခြားအပိုဆုမက်ထရစ်၏ထူးခြားသောအသီးအသီးဇာတ်ကောင်လိမ့်မည်အကြောင်း၊ပြောင်းလဲမှုအပေါ်မူတည်သောရွေးချယ်မှုသင်ဂိမ်းအတွက်။ ဥပမာအားဖြင့်၊အချို့သော NPCs အကြီးအကျယ်သို့ရည်ရွယ်ဇာတ်ကောင်အကွုံအားကြီးသောယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့၊သော်လည်းအခြားသူများနှစ်သက်ကြပါ။, အချို့မိန်းကလေးများအတွက်သာစိတ်ဝင်စားကြပိုက်ဆံနဲ့တစ်မွာက္သည္တင်းကြပ်စွာဂရုသီးသန့်ဘယ်လိုအကြောင်းအကောင်းကစားမှာအမျိုးမျိုးသောတူရိယာ! သင်ရသင်မည်သို့ဆုံးဖြတ်ကိုချဉ်းကပ်ချင်နေတဲ့အခြေအနေကိုထဲကအများဆုံးရရန်သင်၏အချိန်နှင့်အတူ NPCs နှင့်ကျွန်တော်တို့မြင့်မားတဲ့စမ်းသပ်ဖို့သင်အားပေးဖို့နဲ့စိတ်ကြိုက်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ဇာတ်ကောင်ပျော်မွေ့ရန်ဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံခဲ့နှင့်အတူ ၆၂+NPCs လက္ရွိနိုင်နှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ။ FUTA ရှာပုံတော်အစီအစဉ်ကိုထည့်သွင်းဖို့နောက်ထပ် ၁၅ အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ချဲ့ထွင်မှုကြောင့်သာ ၃ ရက်သတ္တပတ်–ရှိခဲ့ဘယ်တော့မှမဖွင့်မှပိုကောင်းတဲ့အချိန်ကစတင်ကစား!
အဘယ်သူမျှမနေပါစေရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်အားကစားအ futanari ဂိမ်းအပေါ်သင့်မိုဘိုင်း၊တက်ဘလက်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာ၊ကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်တဲ့အဖြေ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကတီထွင်ခဲ့သည်အလွန်ထူးခြားတဲ့ဂိမ်းအကြောင်းမိုဘိုင်းနှင့်ကွန်ပျူတာမျိုးကွဲ–နိုင်ပါတယ်နှစ်ခုလုံးရာ၏ထပ်နှင့်အတူချောမွေ့စွာအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်။ အပြင်နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏အတိမ်ချွေတာဂၤါ၊သင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ခဲ့ပါဟန္းလုံးဝနှင့်အတူပြဿနာ။ ငါတို့သည်လည်းအသုတ်အနည်းငယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ဂရပ်ဖစ်ဒြပ်စင်များအခါဝန်တက် FUTA ရှာပုံတော်အပေါ်အစက်အကြောင်းတော့မလုံလောက်တဲ့အစွမ်းထက်ပျော်မွေ့ရန်အပြည့်အဝအတွေ့အကြုံ။, ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ခန့်မှန်း ၉%ကစားသမားကွုံတှေ့မဆိုလျှော့ချရေးအတွက်မိမိတို့အဂိမ်း၏ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်၊ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ဒါကြောင့်တစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောအနည်းငယ်သာအဂၤါဒါကြောင့်လူတိုင်းသည်–အဘယ်သူမျှမဘယ်လောက်ပဲဟောင်းနွမ်းသို့မဟုတ်အသစ်သင့်စက်က–ခံစားနိုင် FUTA ရှာပုံတော်။
ဒါကြောင့်ဘယ်အရာကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်? အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လုံးဝတာဝန်ခံအခမဲ့နှင့်တစ်မိနစ်အတွင်း၊သင်ဖြစ်နိုင်ကစားခြင်းအဆိုပါအလွန်နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အကြီးမားဆုံး futanari လိင်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်အောင်နိုင်အကြမ်းဖြစ်လာ။ ပဲတလမ်းတည်းထွက်ရှာဖို့:အလာအပေါ်၌တင်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်ဖို့ဆန့်ကျင်အရတနာပူ dickgirls! သင်တို့ကိုတွေ့မြင်။